♥ ♥ ♥ အောင်ခိုင်မိုး ♥ ♥ ♥
ကျွန်တော် ဒီဘလော့ဂ်လေးမှာ ဆက်မရေးတော့ပါ။ ဒီနေရာလေးမှာ ရေးနေပါတယ်။ ခုတောါ အလုပ်တွေ နည်းနည်းရှိလို့ ဘာမှမရေးဖြစ်သေးပါဘူး။ နောက်ပြီး ကျွန်တော့်ရဲ့ Social Site လေးကို လာလည်ဖို့ အားလုံးကို ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။
Social Site သို့ သွားရန်
အသိပေးခြင်း 9:47 AM
ကျွန်တော်ကို တောင်းထားတဲ့လူလည်းရှိသလို အားလုံးလည်း ကိုယ်ပိုင် Blog တွေ၊ Wordpress တွေ လုပ်ချင်နေသူတွေအတွက် ကျွန်တော် E-Book လေးတွေ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အားလုံးကို မြန်မာလို ရှင်းပြထားတာပါ။ အားလုံး အထဲမှာ ပြောထားတဲ့အတိုင်း လုပ်ရင် ကိုယ်ပိုင် Blog လေးတွေ ရလာမှာပါ။ ပြီးရင် Css, HTML ကိုလေ့လာလိုက်ပါ။ HTML ကျွမ်းသွားရင် ကိုယ်တိုင် Template ပါ ရေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ HTML E-Book ကို ကျွန်တော်အားရင် ရှာပြီးတင်ပေးထားပါမယ်။ အခုက Blog တွေ Wordpress တွေ လုပ်ချင်သူတွေအတွက် ကျွန်တော် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
E-Book 9:51 PM
ကျွန်တော့်ဘလော့ဂ်ကို လာလည်တဲ့သူတွေအတွက် ကျွန်တော် ဒီစာလေးတွေ ဖတ်ပြီး ပျော်သွားအောက် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်က ပျော်ပျော်နေတတ်တဲ့သူဆိုတော့ အားလုံးပျော်သွားအောင် လုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဖတ်ပြီးတော့ Comment မပေးခဲ့ရင် အပျိုကြီး၊ လူပျိုကြီးတွေ ဖြစ်ရပါစေ။ ( စတာနော်။ တစ်ကယ်ဖြစ်ရင်မသိ :P ) G-Talk Custom Message အဖြစ်လည်း အသုံးပြုလို့ ရပါတယ်။
uk မှာ ဘောလုံးသမား
japan မှာ ဆာမုရိုင်း
us မှာမာဖီးယား
korea မှာ မင်းသား
myanmar မှာ လုကြီးသား ဖြစ်ရပါလို၏ ဘုရား။။
say. you say.နှစ်ယောက်ဆေးတော့
I see. you see. နှစ်ယောက်စီးတော့
I no. you no. နှစ်ယောက်နိုးတော့
ဟာသလေးများ 2:05 PM
Sys-Tools PDF Unlocker v3.1 + crack
မေး : ကိုအောင်ရေ ကျွန်တော် PDF Unlocker ဖြစ်ဖြစ်၊ PDF Remover ဖြစ်ဖြစ် တင်ပေးဦးနော်... အရေးကြီးလို့ပါ။
ကျွန်တော့်ကို အောင်ခိုင်မိုးပဲခေါ်ပါ။ ကြက်သိမ်းထလို့ :D အခု PDF Unlocker လေးပဲအရင်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ PDF Documents တွေကို Lock ချထားရင် ဒါလေးနဲ့ ပြန်ပြီး Unlock လိုက်ပါ။ အသုံးပြုရတာလည်း မခက်ပါဘူး။ ကျွန်တော် Full Version လေးရဖို့အတွက် တော်တော်လေး ရှာလိုက်ရတယ်။ အခုတော့ Full Version ရသွားပါပြီ။ လိုချင်သူများ အောက်မှာ အဆင်ပြေတဲ့နေရာကနေ Download ချသွားလိုက်ပါ။ နောက်ပိုင်း crack တွေကို သိပ်မသုံးတာအကောင်းဆုံးပါ။
PDF Unlocker 1:57 PM
Yamicsoft Windows7Manager v3.0.5
ဒါကိုတော့ လူတိုင်းသိလောက်ပါတယ်။ နောက်ထွက်လာတဲ့ Update လေးမလို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Windows7သုံးနေကြတဲ့လူတိုင်း ဆောင်ထားသင့်တဲ့ Software လေးပါ။ Repair တွေမှာလဲ တော်တော်ကို ထိထိရောက်ရောက် ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါတယ်။ နောက်ပြီး ကျွန်တော် English Blog လေးနဲ့ တွဲရေးနေပါတယ်။ ဒါကြောင့် နောက်ပိုင်း ကျွန်တော် အလုပ်များတော့မှာပါ။ မေးထားတာလေးတွေကိုတော့ အတတ်နိုင်ဆုံး မြန်မြန်ဖြေပေးပါ့မယ်။ English လိုဖတ်ချင်သူများ လာလည်ခဲ့ပါ။ ပြောတာတောင်ဘယ်ရောက် သွားမှန်းသိဘူး။ :D တော်တော်ကောင်းပါတယ်။ ဒီ Software လေးကို သွင်းပြီးရင် Restore Point ကိုအရင်လုပ်ပါ။ အကြောင်းက Restore Point လုပ်ထားရင် မိမိစက် Virus, Maleware တွေကြောင့် Hard Driver တွေမှာပျောက်သွားရင်ဖြစ်ဖြစ်၊ ပြသာနာ တစ်ခုခုဖြစ်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် မိမိခေါ်ထားတဲ့ Restore Point ကို ပြန်ခေါ်ပေးလိုက်ရုံနဲ့ နဂိုအတိုင်းပြန်လည်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်- ဒီနေ့ မှာ Restore Point လုပ်ထားတယ်။ မနက်ဖြန် အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် Windows တစ်ခုခု ဖြစ်ရင် မနေ့က လုပ်ထားတဲ့ Restore Point ကို ပြန်ခေါ်လိုက်ရုံပါပဲ။ ဒါဆို မနေ့ကအတိုင်း ပြန်လည်ရရှိမှာပါ။ Windows စတင်တဲ့လူ၊ ပြန်တင်တဲ့လူတိုင်း အရင်ဆုံးလုပ်ထားသင့်တဲ့ အလုပ်တစ်ခုပါ။ တော်တော်အသုံးဝင်တဲ့ ကောင်လေးပါ။
Window71:08 PM